Soomaaliya iyo argagixisada
Hayaan Cabdisalaam Ismaaciil, Sweden
Waxaa maalmahaan saxaafaha kusoo kordhaya kahowlgalka ay dowlada Maraykanka ka wado meelo ka mid ah Soomaaliya iyada oo sabab ay u tahay baadigoobka argagixisada. Waxaa kaloo iyana dowlada Kenya ay joojisay duulimaadyadii ukici jiray Soomaaliya, baaritaan xoog lehna lagu hayaa soomaalida wadankaa ku nool. Hadaba waa su´aale Soomaaliya ma saldhig argigixisaa? ma waxaa jooga xubno ka tirsan Al-Qaacida? Iyadoo ay adagtahay in la ogaado ayaa haddana dowlada Maraykanku ay aaminsantahay inay joogaan shakhsiyaad ama xubno ka tirsan kooxo uu Maraykanku u aqoosanyahay inay yihiin argagixiso kana soo horjeeda danahiisa. Dowlada kumeelgaarka ayaa iyadu ku haysa gacanta qaybo yar oo magaalada muqdisho. Kooxda isbahaysiga SRRC ee iyadu ah isku tag ay isku tageen ururo hubaysan kana hela mucaawino dowlada Itoobiya, ayaa marar badan ku eedeeyey dowlada kumeelgaarka inay la shaqeyso ururo argagixiso ah ayna ka mid yihiin Al-Qaacida iyo Al-Itixaad.
AL-ITIXAADKA SOOMAALIYA.... GUJI
Ururka Al-Itixaad ayaa bilowgii dagaalada sokeeye ee Soomaaliya ka qeybqaatay dagaalada hubaysan. Ulajeedadiisa ayaa aheyd in Soomaaliya laga dhiso dowlad islaami ah lagu dhaqo shareecada islaamka ah. Waxaa isla markiiba lagu eedeeyey inuu gacansaar la lahaa Usaama una fasaxay inuu saldhiga uruka kasoo weeraro safaarada Maraykanka uu kuleeyahay Kenya iyo Tansaaniya sanadkii 1998. Waxaa iyadana dowlada Itoobiya ay urukaas ku eedeysay inuu bilowgii sanadadii 1990-yadii ka danbeeyey weeraro ka dhacay magaalada Addis Abeba iyo in mucaawino ay u fidiyaan kooxo mucaarad ku ah dowladaas.
Cunaqabateyn xaga dhaqaalaha
Bishii november ee sanadkii hore ayey dowladda Maraykanku soo saartay liis kakooban shakhsiyaad iyo ururo ay tilmaantay inay aragagixiso yihiin amaba kaalmo ufidiyaan. Waxaa liiskaa ku jiray Soomaali ku nool waddankaan Sweden oo iyaga ka ganacsan jiray xawilaada shirkada Al-Barakaat. Raggan ayaa iyaga lagu eedeeyey inay lacag kaalmo ah iyo inay hub u direen ururka Al-Qaacida. Shirkada Al-Barakaat oo iyadu aheyd tan ugu weyn ee xawilaada Soomaaliya isla markaana aheydshirkada ugu weyn ee shaqaaleysiin jirtay dadka soomaaliyeed ayaa laxiray, waxayna taas dhalisay in taleefano iyo internetkaba uu ka joogsado Soomaaliya.
Maraykanka iyo Itoobiya
Su´aal isweydiin leh ayaa waxay tahay dowladda maraykana diyaar ma utahay inay mar labaad faragelin milatari ku sameyso Soomaaliya. Maraykankoo ku fashilay faragelintiisii bilogii 1990-yadii kadib markii ay 18 askari ay ku geeriyoodeen ayaa si degdeg ah kaga baxay Soomaaliya. Waxaa jira warar sheegaya in Maraykanku ciidamo ka tirsan ay ku sugan yihiin Soomaaliya, kuwaas baadigoobaya ururo argagixiso ah. Waxaa kaloo jooga maraakiib ilaalinaya xeebaha Soomaaliya. Saraakiil sare oo Maraykan ah ayaa la kulmay sanadii danbeeyey masuuliyiin matala kooxaha hubaysan ee ka jira wadanka. Kooxahaas oo iyaga ka balan qaaday Maraykanka inay la dagaalami doonaan aragagisada ku sugan halkaas. Arintaan masuuliyiin qaarkood kala dan leh inay kula dagaalamaan kooxaha kale ee iyaga kasoo horjeeda. Waxaa dhici karta in arintaan kordhiso ama dhiiri galiso dad aan iyaga wax lug leh aan ku lahayn aragagixisada. Waxaa kaloo dhici karta in ay tahay arin ay dowlada Maraykanka kaga danleedahay inay! dunida tusto goobjoogeeda geeska Afkika amaba inayba tahay qeyb ka mid ah isku diyaarinta doorashada soo socota ee madaweynenimo.
QORAALADII HORE EE HAYAAN:
URURKA MIDOWGA AFRIKA ( AU ) - HORUMAR MA UKEENI DOONAA AFRIKA?? GUJI.....
MAADAAMA DAD SHISHEEYE AYNA XALIN KARIN QILAAFKEENA, WAA IN NABADUNA MASKAXDEENA KASOO DHALATAA GUJI....
ASTAAMAHA SIYAASIGA SOOMAALIGA AH EE MAANTA JIRAA WAA KUWAN . GUJI.....